Wasiir Dibadeedka Somalia Fowsiya oo Talyaaniga u joogta Khilaafka Safaarada Somalia Ee Italy iyo Diyaarinta Booqosho Madaxweyne Xasan ku tagaayo Talyaaniga – idalenews.com
Wasiirka arimaha dibada ee dowlada Soomaaliya Marwo Fowsiya Yuusuf Xaaji aadan oo maalmihii la soo dhaafay ku sugneyd magaalada London ee dalka ingiriiska ayaa xalay gaartay magaalada Roma ee dalka Talyaaniga.
Wafdi culus ay hogaamimneysay Marwso Fowsiya ayaa waxaa si diiran loogu soo dhaweeyay magaalada Roma ee dalka Talyaaniga waxaana soo dhaweynteeda ka qeyb galay mas uuliyiin ka tirsan dowlada Talyaaniga iyo Diblumaasiyiinta Safaarada Soomaaliya ee dalkaasi iyo qaar kamid ah Soomaalida ee dalkaasi ku nool.
Fowsiya Yuusuf Xaaji Aadan ayaa maanta la kulmi doonta mas uuliyiinta ka tirsan dowlada Talyaaniga waxaan sidoo kale la sheeegay in ay isla maanta la kulmi doonto Jaaliyada Soomaaliyeed ee dalkaasu ku nool.
Riausl wasaare ku xigeen ahna wasiirka arrimaha Dibada Soomaaliya ayaa la sheegay in ay dalka Talyaaniga u aaday xalinta Safaarada Soomaaliya kaasi oo la sheegay Safiirkii Soomaaliya ee Talyaaniga Nuur Cade uu kireeyay mudo 18 sano ah.
Si kastaba ha ahaatee safarka Wasiirka arimaha dibada ee dowlada Soomaaliya ay xalay ku tagtay dalka Talyaaniga ayaa ah safarkii labaad waxaana safarkii koowaad ay ku tagtay magaalada London.
Madaxweyne Xasan oo Arrimo badan ka hor sheegey Xiritaanka Kalfadhigii 1aad ee Barlamaanka